Amaphupho ngamathuna – iAfrika
Uma uphupha ukuthi ubona amathuna noma amatshe ethuna kusho ukuthi uzophinda uthintane nesihlobo esidala noma umngani omdala maduzane. Bazokunikeza izindaba ezimnandi noma bakunikeze iseluleko esihle ngakho ke balalele kahle ukuthi bathini.
8 thoughts on “Amaphupho ngamathuna”
Ngiphuphe amathuna kukho nesikhalo sengane encane
Cofa lapha ukuthola impendulo Amaphupho ngokuzwa ukukhala
Sawubone ngiphuphe ngibona iithuna lika mamncane esewahamba emhlabeni lingujwile kwathathwa okuthile phathikathi, ephupheni ngiyazizwa izinja zikhokhotha kodwa ngasaba ukuvuka nje ngiyabheka ukuthi zikhokhothani ithuna lakhe lise baleni, bangivuka ekuseni ligujiwe. Kusho ukuthini lokhu
12/10/2021 at 07:10
Ngivuk nephuphonj ngathi ngibhelwe ithuna lazelavalwa balikhonka bafak isiphambano esinamangam ami bt umntu owenzalokho obekuwuye obenzalelithun umngani womuntu engithandan Naye mangith ngiyadlula ngiya idlin encane ngifica Indishi enamasimba nezimpethu ngabe kusho lokho
Sawubona. Ngiphuphe kumbiwa ithuna kuzongcwathwa umama wami, egcekeni lasemanxiweni akithi. Kodwa umama ugcwathwe emavikini amabili edlule emathuneni omphakathi. Ngicela incazelo.
25/03/2021 at 05:29
ukuphupha uphahla ethununeni ngabe kusho ukuthini
Ngiyabong ngolwazi eninalo ngama siyasizakala kakhulu